ไบร์ทวิน เล่นเกมทายความลับ "Truth or Drink จริงหรือดื่ม" #คั่นกู | เพราะเราคู่กัน 2gether The Series - MY - Stindx.com
Number of symbols: 11196
- ကောင်းပြီ ... - Truth! မပြီးသေးဘူးလေ! မင်္ဂလာပါ … Bright, Vachirawit Chivaaree ပါ မင်္ဂလာပါ ... Win, Metawin Opas-iamkajorn ပါ [ဘာတွေလောနေတာလဲ?] ကျွန်တော်တို့က 2Gether The Series က ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကို သောကြာနေ့ည 10နာရီတိုင်း GMM 25 မှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ... ကြည့်ဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော် မကြည့်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုရင် 11 p.m. ကျရင် LINE TV မှာလည်း ပြန်လည်ပြသပေးမှာပါ ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါဆိုရင် နောက်မှတွေ့ကြမယ် [ဟေးးးးး!!] [နေပါဦးးးးး!!] Okay, ဘာ game ဆော့ကြမှာလဲ? လုပ်လိုက်တော့ စည်းကမ်းချက်များ : ကိုယ့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို တစ်ယောက်တစ်လှည့် ပြောပြကြပြီး ကျန်တဲ့တစ်ယောက်က TRUTH လား FALSE လား ခန့်မှန်းရမယ် ခန့်မှန်းတာ မှားတဲ့လူက သောက်ရမယ် Win အကြောင်း ဘယ်လောက်သိလဲ? တော်တော်များများကို သိပါတယ် … ဒါပေမယ့် အားလုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ - တချို့ဟာတွေတော့သိပါတယ် ဒါပေမယ့် သိဖို့လိုတာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ် - အဲ့လောက်လည်း သိစရာမလိုပါဘူး [အဲ့လိုကြီးတော့ မပြောလိုက်ပါနဲ့] အမှန်အတိုင်းပြောရရင်, game ဆော့ရင် ကျွန်တော်က ရှုံးတာနိုင်တာကို အဲ့လောက် ဂရုမစိုက်ဘူး အဓိကက ကြည့်နေတဲ့သူတွေကို ဖျော်ဖြေပေးနိုင်ဖို့ပဲလေ [Hmmmmmmmmmmmmm] Mr. Bright, Vachirawit ပဲ ဖြစ်ပါတယ် စလိုက်ကြရအောင် ... ဘယ်သူနိုင်မလဲ တအားသိချင်နေပြီ ROUND 1 ဒါ ဘာဖျော်ရည်လဲ သိလား? [ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်] ဒီဟာကို ကျွန်တော်သိတယ်ထင်တယ် ... ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်ပဲ ဟုတ်တယ်မလား? မဟုတ်ဘူးလား? - ဘာဖျော်ရည်လဲ? ခန့်မှန်းကြည့် - ခရမ်းချဉ်သီး? ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်? ကျွန်တော် ဒါကြီးကို တကယ်မုန်းတယ် တကယ် တအားကို ကြိုက်တာ စုံစွမ်စိ ချမယ် … နိုင်တဲ့သူ အရင်မေး
အစ်ကို သိလား? ကျွန်တော် မူလတန်းတုန်းက ဘောလုံးကစားရတာ တကယ်ကြိုက်တယ် ပြီးတော့ ဘောလုံးကန်ဖို့ လေ့ကျင့်ရတယ်မလား တစ်နေ့ကျတော့ ကျွန်တော်က ဘောလုံးကန်တဲ့ဖိနပ် စီးလာတယ် လေ့ကျင့်နေတုန်း ချော်လဲရော အဲ့မှာ ဘာဖြစ်သွားလဲ သိလား? ခြေထောက်ကျိုးသွားတယ် TRUTH လား FALSE လား အဲ့ဇာတ်လမ်းကြီး ငါမယုံဘူး - ဒါက နောက်ဆုံးအဖြေ သေချာပြီလား? - ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် မယုံဘူး … မယုံဘူး ဘာလို့လဲ? မသိဘူး … သူ့ပထမဆုံး မေးခွန်းကို NO ဖြေဖို့ အိမ်မှာတည်းက စဉ်းစားလာတာ COME ONNNNNNN အဖြေက... - Truth လား False လား? - False. အမှန်က ကျိုးသွားတာ ခြေထောက်မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော့်လက်ဗျ - Oh, လက်ကျိုးသွားတာလား? - ဟုတ်ကဲ့ ငယ်ငယ်လေးတုန်းကလား? မူလတန်းလား? Grade3လောက်တုန်းကပါ Toe Laew Show မှာ အစ်ကို့ကို တွေ့တယ်မလား အဲ့တုန်းက ပထမဆုံး မိန်းကလေးလို ဝတ်ဖူးတာ အဲ့ဒါကို ယုံလား? TRUTH လား FALSE လား ယုံတယ် မှန်တယ် ဟုတ်တယ် … အစ်ကို အဲ့အကြောင်း တစ်ခါပြောဖူးတာ ကျွန်တော်မှတ်မိတယ် ဟုတ်တယ် … interview တစ်ခုရှိတုန်းက ပထမဆုံးနဲ့ တစ်ခေါက်တည်းသော မိန်းကလေးပုံဝတ်တာလို့ ပြောခဲ့တာ ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ဒီမေးခွန်းကိုမြင်တော့ ကျွန်တော်က... Win ကို တစ်ခေါက်လောက် ပေးနိုင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးပဲ တွေးလိုက်တာ ROUND2ဒါကတော့ ကျွန်တော့် ဖြစ်ရပ်ပါ (Win စကားမှား) ဖြစ်ရပ်! ကျေးဇူးပါ - အဲ့ဒါက... - Truth! မပြီးသေးဘူးလေ! ကျွန်တော်ပြောရင် ယုံမလားမသိ ကျွန်တော် အစားတွေ နင်းကန်စားခဲ့တဲ့ အချိန်မျိုး ရှိခဲ့တယ်
- ဘယ်လောက်တောင် စားလဲဆိုရင်.. - ဘယ်အရွယ်တုန်းကလဲ? မူလတန်းတုန်းက ... (…..)ကိုတောင် သွားလိုက်ရတယ် [စကားတွေထစ်] - အား … မယုံဘူး - မပြီးသေးဘူး! အင်္ဂလန်ကို သွားခဲ့တယ် - အဖြေပြောပြီးပြီ - နေပါဦး အဲ့ဒီအဖြေပဲ! ထပ်နားထောင်စရာကို မလိုတော့ဘူး ... မယုံဘူး TRUTH လား FALSE လား False. အမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အာရုံရနေတယ် ... အနံ့ခံမိနေတယ် လူလိမ်နံ့တွေ ရနေတယ် - မှန်တယ်မလား? - ဟုတ်တယ် တွေ့လား? သိနေတယ် … အနံ့တွေ ရနေတယ် အမှန်က? အများဆုံး ကိုယ်အလေးချိန် ဘယ်လောက်ထိရှိခဲ့ဖူးလဲ? 80 မူလတန်းမှာ 80kg ဆိုရင် … တော်တော်ထွားတဲ့ ကလေးပဲ အဲ့တုန်းက Grade 10 ထင်တယ် ကလေးတုန်းက အစ်ကိုက ကျောင်းကcampsတွေမှာ ဝင်ရတာမကြိုက်ဘူးဆိုတာ သိတယ်မလား ငယ်ငယ်တုန်းက အမေနဲ့ အကြီးအကျယ် စကားများခဲ့ရသေးတယ် သူက တရားစခန်းဝင်စေချင်တာကို အစ်ကိုက ငြင်းလို့ - အဲ့ဒါကိုယုံလား? - မယုံဘူး Truth. - ဘယ်လို? - အဲ့ဒါအမှန် WIN သောက်ရတော့မယ် မဟုတ်ဘူး .. တကယ်တော့ .. တရားစခန်းမှ မဟုတ်ဘူး ဘယ် camps ကိုမှ မဝင်ချင်တာ … လူရည်ချွန်တို့ တခြားဘယ်ဟာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမေက camp ဝင်စေချင်တိုင်း အမေနဲ့ ရန်ဖြစ်ရပြီ ဒေါသကြီးတတ်တဲ့သူမျိုးလား? (hot head) - ဒေါသကြီးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုပဲ... - မေးစရာတောင် လိုသေးလို့လား? အဲ့ဒီအဖြေပဲ! ထပ်နားထောင်စရာကိုမလိုတော့ဘူး ... မယုံဘူး မေးစရာတောင် လိုသေးလို့လား? မသွားခဲ့ရုံပါ ကျွန်တော်က ခေါင်းမာတယ် ဒါပေမယ့် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာမျိူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး
ဒေါသထွက်တာတော့မဟုတ် ... အမေကလာပြီး "Bright ရေ ဒီ camp ကို ဝင်ပါ..." [HOT HEADED] (ဒေါသကြီး) "ဟင့်အင်း ... ကျွန်တော်မသွားချင်ဘူး" အဲ့လိုမျိုးပဲ ငြင်းလိုက်တာ သူအဲ့လိုမျိုး ပေါက်ကရတွေလုပ်နေရင် တော်တော်ကို မကြိုက်တာ ROUND3ဘာကြီးလဲ? နောက်ထပ်ဘာလဲ? [ဆေးခါး] ဒါဘာကြီးလဲ? ငါးပိ လား? ငါးပိ မဟုတ်ဘူး! ငါးပိနဲ့ တော်တော်တူလိုက်တာ အနံ့ရှူကြည့် - Hey, ဒီဟာကို တကယ်ကြိုက်တယ် ... ငယ်ငယ်တုန်းက အမေ့ကို ခဏခဏလုပ်ပေးခိုင်းတာ - ကြိုက်တယ် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က တရားစခန်း ၃ခု ဝင်ဖူးတယ်ဆိုရင် ယုံလား - ဟင်? ဒါပဲလား? - ဒါပဲ ဟင့်အင်း … မယုံဘူး တကယ်ပဲ ဒီနေ့မင်းကို ကြည့်ရတာ လူလိမ်ရုပ်ပေါက်နေလို့ ဘာပြောပြော False လို့ပဲ ဖြေချင်နေတယ် သူတော်တော်ပျော်နေပုံရတယ် ... သူကကျွန်တော့်ကိုဆို အမြဲစနောက်ချင်နေတာ ဒီနေ့ကတော့ တကယ့်နေ့ပဲ အဲ့တော့ မယုံဘူး မဟုတ်ဘူး … အဲ့ဒါ အမှန် camera တောင် မမီလိုက်ဘူး! [ပဲငံပြာရည်] အစ်ကို guitar နဲ့ drums နဲ့ တီးတာ ညီ သိတယ်မလား? ဒါပေမယ့် အစ်ကိုက Khlui လည်း ကျွမ်းတယ် (ထိုင်းပလွေ) ဘာကြီး? Khlui. Khlui. Khlui. Khlui ကို သိလား? ဘယ်လိုမှုတ်ရလဲ သင်ဖူးလား? ဒါကို ယုံလား? - ဘယ်တုန်းတည်းက Khlui ကျွမ်းတာလဲ? - ငယ်ငယ်တုန်းက မူလတန်းတုန်းကလား? ဟုတ်တယ် မယုံဘူး အွန်း … ဟုတ်တယ် truth ဟုတ်တာလား false ဟုတ်တာလား? အမှန်မဟုတ်ဘူး ROUND4ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဘောင်းဘီထဲ အီးပါချဖူးတယ်ဆိုရင် ယုံလား? ပြီးတော့ ဘောင်းဘီထဲက မထွက်ကျအောင် ထိန်းထားတာ
ကျောင်းကနေ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ထိ ဘယ်သူမှ သတိမထားမိဘူး အဲ့ဒါ ယုံလား? မယုံဘူး လုပ်ပါဦး ... ဘာလို့လဲ? - ထပ်ပြီးစဉ်းစားပါဦး - မယုံဘူး - မယုံဘူးလား? - အွန်း သောက်လိုက်တော့ အရသာ ဘယ်လိုနေလဲ ငန်တယ် ... မမေးသင့်ဘူး ... မချဉ်တာတော့သေချာတယ် အဲ့ဒါတကယ် ဖြစ်ခဲ့တာ အဲ့တုန်းက အတန်းထဲမှာ ကျွန်တော်က ဘောင်းဘီထဲ အီးပါချမိတာ တကယ်ရှက်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေကိုကအစ ဘယ်သူ့ကိုမှမသိစေချင်ဘူး သူတို့သိရင် ကျွန်တော့်ကို တစ်သက်လုံး စလို့ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူး အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က အဲ့တိုင်းလေးထိုင်နေလိုက်တယ် ... တတ်နိုင်သမျှနည်းနည်းပဲ လှုပ်တယ် ဘယ်အရွယ်လဲ? Grade2လောက်တုန်းက - အဲ့ဒါဆို အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက လိမ်ခဲ့တာပေါ့ - ဘာလို့လဲ? သူတစ်ခါမှာ ဘောင်းဘီထဲ သေးမပေါက်ချဖူးဘူး အီးမပါချဖူးဘူးလို့ ညာခဲ့တာ သူများတွေလို ငယ်ငယ်တုန်းကပဲ ပေါက်ချဖူးတာ ကြီးတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ် ကျွန်တော် အသက်ကြီးတော့လား? - နှစ်တန်းဆိုတာ ကြီးနေပြီ - မဟုတ်ပါဘူး - ဘယ်နှစ်တန်းအရွယ်မှ ဘောင်းဘီထဲ အီးမပါချဘူး - ရှိတယ်! သူငယ်ချင်းတွေလည်း အဲ့လိုပဲ ... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ရှက်လို့ ... ဘယ်သူမှမသိအောင်ထားတာ - အဲ့တော့ အထုပ်လိုက်အတိုင်း အိမ်သယ်သွားတာပေါ့? - အိမ်ထိကို သယ်သွားတာ အမေ့ကို ပြောပြလား? - မပြောပြချင်ခဲ့ဘူး ... အစက အမေ့ကို ပြောရမှာ ကြောက်နေတာ - ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ သန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုက်တာလား? - သိသွားမှာကြောက်နေတာ - ကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တာလား ဒါပေမယ့် လှေကားပေါ်တက်တော့ ခြေထောက်ကြွရတယ်လေ ... ရှေ့ကိုလှမ်းတက်ရတယ်မလား? အဲ့တော့ ဘောင်းဘီပေါက်က ဟသွားပြီး ခြေထောက်ပေါ် အကုန်ကျလာတာ
အမေက လှည့်ကြည့်ပြီး မြင်တော့ "Win, ဘာတွေပေနေတာလဲ!?" အဲ့လိုနဲ့ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ အမေသိသွားတာပါပဲ အမေက ကျွန်တော့်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်တယ် ... ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဒါပါပဲ ဟုတ်ပြီနော်? ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနဲ့ ကိုယ်တွေပဲ သိထားမယ် [ပင်မှည့်သီးဖျော်ရည်] အစ်ကို ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းစာအရမ်းလုပ်တယ် video games တွေ ဆော့ရတာကို တော်တော်ကြိုက်တယ် စာမလုပ်တဲ့အချိန်တွေဆိုရင် video games တွေပဲ ဆော့နေတာ Dota ကိုလည်း အချိန်တစ်ခုလောက် စွဲသေးတယ် အဲ့အချိန်တုန်းက သီတင်းပတ်တော်တော်ကြာအောင် တစ်ရက်ကို 3နာရီအောက်ပဲ အိပ်ချိန်ရှိခဲ့ဖူးတယ် အဲ့ဒါကို ယုံလား? - အထက်တန်းတက်တုန်းကလား? - အင်း … အထက်တန်းတုန်းက Truth. မဟုတ်ဘူး false. ဒီဟာက သောက်ရတာ အေးဆေးပါ ... သူက ပင်မှည့်ကြိုက်တယ် ဟုတ်တယ်မလား? video games တွေ စွဲပေမယ့် အိပ်ရတာကို ပိုကြိုက်တယ် အဲ့တော့ အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး game မဆော့ဘူး တခြားလည်း ဘာမှမလုပ်ဘူး Round5[သံပုရာရည်] ကျွန်တော် စုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေကို 50,000 baht (USD 1600) လောက်တန်တဲ့ တစ်ခုခုဝယ်ဖို့ သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင် ယုံမှာလား? မယုံဘူး ဒါသောက်လိုက်တော့မယ် အဲ့ဒါတော့ မယုံဘူး ကျွန်တော်ကတော့ Win ကို အသုံးအဖြုန်းကြီးတဲ့သူလို့ မထင်ဘူး ဘယ်အရာကိုလဲတော့ မသိဘူး ... ဘယ်လိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ အရာလဲတော့ မသိပေမယ့်ပေါ့ ဒါဆို အဖြေက... မှန်ပါတယ်! - အဲ့ဒါဆို မသုံးခဲ့ဘူးမလား? - ဘယ်သုံးမှာလဲ
ကျွန်တော်က အသုံးကြမ်းတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ စကားပြောကြရင်း သူ့ကို ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုသုံးလဲ မေးဖူးတယ် သူက သူ အသုံးအဖြုန်းမကြီးဘူးလို့ ပြောဖူးတယ် ... သူက အစားပဲ အစ်ကို့ရဲ့ ပထမဆုံးအိပ်မက်က အာကာသယာဉ်မှူးဖြစ်ဖို့ ဒါကို ယုံလား? ခက်လိုက်တာ ... ဘယ်သူက သိမှာလဲ? အစ်ကို့ အိပ်မက်...... ဘယ်တုန်းကလဲ... မူလတန်းတုန်းကလား? မဟုတ်ဘူး အထက်တန်း? မဟုတ်ဘူး မူကြို? ဟုတ်တယ် ယုံတယ် မှားတယ် ငယ်ငယ်တုန်းက ပထမဆုံးအိပ်မက်က သိပ္ပံပညာရှင် ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ သောက်လို့ရပြီ ... ခုချိန်က Vitamin C လိုအပ်နေတာ ဖျားနာတာတွေ ကင်းအောင် မချဉ်ဘူး … မချဉ်ဘူး ချိုတယ် … ချိုတယ် … ချိုလိုက်တာ! ချိုတယ် မချဉ်ဘူး ROUND6[ပဲငံပြာရည်] (ထပ်လာပြန်ပြီ) ကျွန်တော် ဒီနေ့ boxer အဖြူရောင် ဝတ်လာတယ်ဆိုရင် ယုံလား? ခုသောက်ရမှာ ဒါသာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ခုလောက်ထိ စဉ်းစားနေမှာမဟုတ်ဘူး - ဒါဆို အဖြေက... - မယုံဘူး ကျွန်တော် မယုံဘူး … မယုံဘူး … မယုံဘူး ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ် ... အစ်ကို မှန်တယ် ဒါပဲလ​ေ ... ဘယ်သူကမှ ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ပြခိုင်းမှာ မဟုတ်ဘူး ပြခိုင်းမှာ!!!! အစ်ကို ပထမဆုံး မွေးဖူးတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်က ပူးကောင် အဲ့ဒါ ဘာကောင်လဲ? ကြွက်အကြီးစား ဒီလောက်အရွယ်ရှိတဲ့ ကြွက် Gatsby ကြွက် ("ကြောင်လောက်ရှိတဲ့ ကြွက်"လို့ ပြောချင်တာလားပဲ) - အစ်ကို့ဆီမှာ ခုမရှိတော့ဘူးမလား? - မရှိတော့ဘူး
- သေသွားပြီမလား? - ဟုတ်တယ် မယုံဘူး အွန်း … အဲ့ဒါ အမှားကြီး Niceeeeeeeeeeeeee အစ်ကို့မှာရှိခဲ့တာက hamster ဖြစ်တာက လွဲလို့ တော်တော်များများကအမှန်တွေ ... ပိုပြီးလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ဘာလို့ hamster မွေးတာလဲ? ပြောပြပါဦး ကျွန်တော်က ဉာဏ်ရည်မြင့်တဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကို သဘောမကျဘူး ကိုယ့်ကို မှတ်မိနေမယ်ဆိုတာ သိတယ် … ကျွန်တော့်ကို စောင့်နေတာမျိုး မလိုချင်ဘူး အဲ့တော့ ကိုယ့်သခင်ကိုယ် မမှတ်မိတဲ့ တိရစ္ဆာန်မျိူးပဲ မွေးချင်တာ အဲ့လိုဆိုရင် ကျွန်တော်ကျောင်းက ပြန်လာတာကို စောင့်နေစရာလည်း မလိုတော့ဘူး ROUND7ကျွန်တော် တိရစ္ဆာန်တွေကို ကြောက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းက ငယ်ငယ်တုန်းက ကြောင်ကိုက်တာခံရလို့ဆိုရင် ယုံလား? လူတွေက ကြောင်ကိုက်တာပဲ ခံရရုံလောက်နဲ့တော့ တိရစ္ဆာန်တွေကို မကြောက်ပါဘူး အဲ့ဒါအမှန်လို့ ညီက ပြောရင်တောင် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မယုံဘူး … အဲ့ဒါကို မယုံဘူး အဖြေက...မှန်ပါတယ်! ကြောင်ကိုက်ခံရရုံနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးကို မကြောက်နိုင်ဘူးလေ ကြောင်ကိုက်ခံရရင် ကြောင်ကိုပဲကြောက်မှာပေါ့ အကုန်လုံးတော့ ဘယ်ကြောက်မလဲ ညီက တိရစ္ဆာန်တွေကို မကြောက်တတ်ဘူးမလား? ကြောက်တယ် တိရစ္ဆာန်အားလုံးကိုတော့ မဟုတ်ဘူးမလား လိမ္မာတဲ့ ခွေးတွေက လွဲလို့ အဲ့လိုခွေးတွေတော့ မကြောက်ဘူး Golden retrievers လိုမျိုး လိမ္မာတဲ့ ခွေးတွေ ဒါပေမယ့် တိရစ္ဆာန်အားလုံးကို ကြောက်တာတော့ မဟုတ်ဘူးမလား တချို့ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဆော့နိုင်တယ်မလား? ကြောက်တာပဲ လမ်းမှာ လမ်းဘေးခွေးတစ်ကောင်နဲ့ တွေ့ရင် ကြောက်လန့်နေမှာ တိချစ်သူဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေတာကို ပါဝင်ပူးပေါင်းမှုကို မရှိဘူး မရဘူး … ဒါတော့ လုံးဝကို မရတာ အစ်ကိုက ကျောင်းတုန်းက တော်တော်ကို ဉာဏ်ကောင်းတာ
တော်လွန်းလို့ ပုံမှန်အတန်းတွေမှာတောင် စာမသင်ရဘူး အဲ့ဒါကြောင့် ဆရာမတွေက သက်သက်ခွဲပြီးစာသင်ခိုင်းရတယ် အဲ့ဒါကို ယုံလား? တစ်ယောက်တည်း စာသင်ရတာလား? အတန်းခွဲသင်ရတာ ပုံမှန် သင်ရိုးထက်ကျော်ပြီးတော့ သင်ရမှာမို့ တခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ တူတူမနေရဘူး - အစ်ကိုက အဲ့လောက်တော်ခဲ့တာလား? - အွန်း - ဘယ်တုန်းကလဲ? - မူလတန်းကျောင်းမှာ မူလတန်းကျောင်း? မယုံဘူး ထပ်ဖြေချင် ဖြေလို့ ရသေးတယ်နော် မယုံဘူးပဲ အဖြေက... အဲ့ဒါ အမှန်ပဲ အမေက အိမ်ပြန်လာဖို့ ခေါ်နေပြီ နေပါဦးးးးးးး!! အစ်ကို့ကျောင်းက ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြိုင်အဆိုင်တွေ ပြင်းတယ် အဲ့တော့ သူတို့က စာတော်တဲ့ကျောင်းသားတွေကို ခေါ်ပြီး သီးသန့်အတန်းတွေမှာ ထားတာ ကျောင်းစာတွေ ပြိုင်ကြဖို့ အတော်တန်းတွေ အစ်ကိုက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စာတူတူမသင်ရဘူး ... အတော်တန်းထဲက အဖွဲ့နဲ့တူတူ သင်ရတာ သင်္ချာတန်းက အဖွဲ့ , သိပ္ပံတန်းက အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတန်းက အဖွဲ့ အဲ့လိုမျိုး ... ပြိုင်ပွဲတွေအတွက် သက်သက်စီခွဲပြီး စာသင်ရတာ ဘာသာရပ်တော်တော်များများတော်တော့ ဘာသာတိုင်းအတွက် ပြိုင်ရတယ် တခြားသူတွေလိုမျိုး မသင်ခဲ့ရဘူး ပုံမှန်အတန်းတွေမှာ မတက်ရဘူး မနက်ခင်းတိုင်း တခြားကျောင်းသားတွေ မနက်ပိုင်းစုဝေးပွဲ သွားရရင် အစ်ကိုက အတော်တန်းထဲ တန်းသွားရတယ် Damn. ကိုယ့်အတန်းထဲတောင် ကိုယ်မနေရဘူး P'Bright သောက်သလိုမျိုး သောက်ပြမယ် ဘာခံစားချက်မှမရှိဘဲ ဘာ expression မှ မပြဘဲနဲ့ ဒါလေး လုပ်ရမယ် ... camera ကို OK sign လေး ပြလိုက်ပါဦး Ok sign ရော ပြဦး ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းထောင့်လေးက ပြုံးလိုက်ပါဦး ရပြီ ဒီနေ့ game က ဘယ်လိုနေလဲ? ကောင်းတယ် … ကောင်းပါတယ် ... သဘောကျတယ် ကျွန်တော်တို့ကို ချစ်ခင်အားပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မဟုတ်ဘူးလေ! game အကြောင်း ပြောပါဦး! ကျွန်တော်တို့ ပျော်ခဲ့ပါတယ် … ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သူတွေလည်း သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ဗိုက်ထဲမှာ နေလို့မကောင်းတော့ဘူး ဟုတ်ပါပြီ … ကျွန်တော်တို့ကို follow မယ် ဆိုရင် ဒီမှာပြထားတာတွေ အကုန်လုံးကို follow နိုင်ပါတယ် ဒါ့အပြင် 2Gether The Series အတွက်လည်း LINE TV မှာ channel ရှိပါတယ် - ကျေးဇူးပြုပြီး subscribe နဲ့ follow လုပ်ပေးကြပါ - fan ဖြစ်ဖို့ fan ဆိုတဲ့ button လေးကို နှိပ်လို့ရပါတယ်, ဟုတ်တယ်မလား? - Behind the Scenes တွေကိုလည်း ရှာကြည့်လို့ ရပါတယ် - ဟုတ်ပါတယ် ... Behind the Scenes LINE TV မှာ Behind the Scenes LINE TV platform မှာလည်း follow ပေးကြပါဦး ပြီးတော့ original sound tracks တွေလည်း ရှိပါတယ် P'Max Jenmana ရဲ့ Tid Kub ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး MV ထဲမှာ ပါပါတယ် ပြီးတော့ Kan Goo, ဆိုထားတာကတော့ ကျွန်တော်ပါ နှစ်ယောက်လုံးလည်း MV မှာ ပါပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် - ဟုတ်ကဲ့ပါ ... follow ပြီး ကြည့်ပေးကြပါဦး - Bye-bye အခု ကျွန်တော် အိမ်သာသွားဖို့ လိုနေပြီ